जनयुद्ध दिवस र घोरदौरामा फायरिङ जुलुस – जागरण अनलाइन
२०७५ माघ २९, मंगलवार २०:४५ मा प्रकाशित
अहिले देशभर २४ औं जनयुद्ध दिवस मनाउने कार्यक्रम छ । विगतमा साप्ताहिक रुपमा जनयुद्ध दिवस मनाइन्थ्यो । कुनै बेला ठुल—ठुला आक्रमण गरेर जनयुद्ध दिवस मनाइन्थ्यो त विविध कार्यक्रम नाराजुलुस, फायरिङ जुलुस, लगायतका कार्यक्रम पहिलो सप्ताहमा गरिन्थ्यो भने दोस्रो सप्ताहमा सहीद परिवारलाई अभिनन्दन गरेर मनाइन्थ्यो । फागुन १ अर्थात जनयुद्ध दिवस यो ऐतिहासिक दिनको रुपमा पनि परिचित छ ।
नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएको दिनको रुपमा पनि लिइन्छ । ०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी, रुकुमको रुकुमकोट राडी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढ र काभ्रेको दौलत विक्रम दोङ माथी एकै दिन कार्वाही गरी सुरुवात गरेको दिनको रुपमा पनि यसलाई तत्कालिन नेकपा माओवादीले भव्य र सभ्य रुपमा मनाउदै आएको थियो ।
कुरा ०६१ सालको हो । म माओवादी कार्यकर्ता अर्थात एसिमको रुपमा कार्यरत थिए । घोराही क्षेत्रमा युद्ध भिषण चरणमा थियो । छापामार युद्धको समाप्ती पछि चलायमान युद्ध हुदै मोर्चावन्दी लडाई सुरु भएको थियो । दोस्रो वार्ता समाप्त भैसकेको थियो । तत्कालिन शाहि नेपाली सेना व्यारेकवाट ५ किलोमिटरमा मात्र केन्द्रित थियो । ८० प्रतिशत भुभागमा विद्रोही माओवादीले कब्जा जमाइसकेको थियो । बजारको वरिपरि माओवादीले आफ्नो इलाका मान्थ्यो ।
त्यही बखत हो मैले घोराही क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिए । सदरमुकाम क्षेत्रमा काम गर्न निकै गाह्रो थियो । तैपनि जिम्मेवारी लिएर खटेको थिए । लगत्तै जनयुद्ध दिवस आयो । हाम्रो एरिया इन्चार्जको रुपमा विप्लव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो—प्रकाश कमरेड तपाईको कमाण्डमा फायरिङ जुलुस गर्नुस् । कुन ठाउँमा ? भन्दा उहाँले भन्नुभयो–घोरडौरामा । मैले सहर्ष स्वीकार गरी घोरदौराको देउखरे दाजु संगै ४ जना अन्य युवाहरुलाई साथै लिएर फायरिङ जुलुसमा गए ।
हातमा २ वटा सकेट बम र एउटा भरुवा बन्दुकको साथमा गएर मैले दुई वटा बम पड्काए र देउखरे दाजुले ४ राउण्ड भरुवा बन्दुक पड्काएर फायरिङ जुलुस सफल पारेका थियो । त्यतिबेला लाग्थ्यो २ वटा बम र भरुवा बन्दुकको आवाजले साच्चै परिवर्तन आउला ? घोरदौराको लेकमा बम पड्काएर के परिवर्तन होला र ? सामान्य लाग्थ्यो । सदरमुकाम देखी ५ किलोमिटर घोराही बजारदेखी उत्तरपुर्व पहाडी इलाका रमणीय ठाउँको रुपमा परिचित भएको छ । पर्यटकिय गन्तव्य समेत बनेको देख्दा फायरिङ जुलुसले युद्ध पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा पनि घोरदौरालाई चिनाउन सकिएको छैन ।
तर पनि घोरदौराको महत्व व्यापक थियो÷बनेको छ । त्यतिवेला फायरिङ जुलुसको । घटना अझै ताजै लाग्छ । तर १४ बर्ष पुगिसकेछ । त्यो सपना वर्गसंघर्षकै सपना थियो । त्यस्तो आगोको झिल्को नेपालमा कहिलै बलेको थिएन । त्यस्तो बलिदानी नेपाली जनताले कहिलै चुकाएको थिएन । त्यो बलिदान नयाँ युगको लागि भनियो । जनताले लडेको न्यायपुर्ण युद्धलाई जनयुद्ध भनियो । हो कि जस्तो पनि थियो । जनताको अपार सहभागिता थियो । तर यो २४ बर्षमा हाम्रा घरका भित्ताहरुमा धेरै क्यालेन्डरहरु फेरिए । समय फेरियो । परिस्थिती फेरियो । समयले उनिहरुलाई फेरेको हो वा उनिहरुले समय फेरेको हो ? उनिहरुले परिस्थितिलाई आफू अनुकुल बनाएको हो वा परिस्थिती अनुकुल आफुलाई बनाएको हो यो कुरा भने आम नागरिकलाई मन नपरेकै हो ।
अहिले कार्यक्रम पनि अलि फरक छ । हिजो सर्वहारा जनताको पक्षमा बर्गसंघर्षको नारा लगाएर जनयुद्ध दिवस मनाइन्थ्यो भने अहिले मध्यमवर्ग संग वर्गसमन्वय गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउदा साच्चिकै समयले कोल्टे फेरेकै बुझिन्छ । शान्ति र संविधानको नाराले क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति हराएको छ । त्यो फायरिङ जुलुसले अझै माग गरिरहेको छ । त्यो जुलुसले अझै चित्त बुझाएको भने छैन । तै पनि २४ औं जनयुद्धको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
प्रहरी कर्मचारीले कर्मचारी प्रशासनमा इन्स्पेक्टर गोविन्द पन्थीको अभाबको महशुस गर्न नपरोस २०७५ माघ २९, मंगलवार २०:४५
कमलको तारिफ गर्दा किचड रिसाउला २०७५ माघ २९, मंगलवार २०:४५
विप्रेषण गरिवि निवारणका लागी २०७५ माघ २९, मंगलवार २०:४५